Nanafatra ny 'herinandro tsy fiasana' nasionaly i Russia satria niakatra ny fahafatesan'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Nanafatra ny 'herinandro tsy fiasana' nasionaly i Russia satria niakatra ny fahafatesan'ny COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nanafatra ny 'herinandro tsy fiasana' nasionaly i Russia satria niakatra ny fahafatesan'ny COVID-19.
Ny isan'ny maty isan'andro COVID-19 any Rosia dia nisondrotra nandritra ny herinandro maro ary nahatratra voalohany ny voalohany tamin'ny faran'ny herinandro teo nandritra ny faran'ny herinandro teo anelanelan'ny tahan'ny fanaovam-baksiny, ny fiheveran'ny besinimaro ny amin'ny fitandremana sy ny tsy fankasitrahan'ny governemanta henjana ny fameperana.
Rosia dia nitatitra fahafatesan'ny COVID miisa 1,028 24 tao anatin'ny XNUMX ora, ny isa avo indrindra hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana.
Ny isan'ny maty indrindra dia notaterina tany amin'ireo tanàna roa lehibe indrindra ao amin'ilay firenena, Moskoa sy St. Petersburg.
Nisy ihany koa ny fitomboana haingana ny isan'ny fitiliana tsara momba ity viriosy ity, ka olona 34,073 no voamarina fa voan'ny aretina nandritra io fotoana io ihany.
Nasaina nijanona tsy niasa nandritra ny herinandro ny mpiasan'ny Russia nanomboka tamin'ity volana ity teo afovoan'isan'ny aretina COVID-19 miakatra be sy ny maty.
Nankatoavin'ny filoha rosiana Vladimir Putin ny fikasan'ny governemanta hanafatra ny mpiasa manerana ny firenena herinandro tsy iasana, amin'ny fikasana hampijanona ny fitomboan'ny isan'ny maty vokatry ny virus coronavirus.
Ny vondron'ny mpiasan'ny governemanta Rosiana tamin'ny Alarobia dia nitatitra fahafatesan'ny COVID miisa 1,028 nandritra ny 24 ora lasa teo, ny isa avo indrindra hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Izany dia nitondra RosiaNy isan'ny maty dia 226,353, izay hatreto no avo indrindra.
Tamin'ny fivorian'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta ny alarobia lasa teo dia nanome ny tohiny fiomanana i Putin hanitatra ny fetim-pirenena kasaina roa andro ary hitazomana mpiasa marobe ao an-trano, miaraka amin'ny karama mandritra ny herinandro iray.
Eo ambanin'ireo drafitra ireo dia hikatona manerana ny firenena ny birao eo anelanelan'ny 30 Oktobra ka hatramin'ny 7 Novambra, saingy nanampy i Putin fa any amin'ny faritra sasany izay atahorana indrindra ny toe-draharaha, ny fotoana tsy fiasana dia mety hanomboka hatramin'ny asabotsy ary hitarina aorian'ny 7 Novambra.
I Putin dia ilaina izao Rosia “Manapaka ny roan'ny fiparitahan'ny virus… Ny andraikitray lehibe ankehitriny dia ny fiarovana ny ain'ny olom-pirenena ary, araka izay tratra, hampihena ny fihanaky ny aretina COVID-19.”
Ity drafitra ity dia manolotra ihany koa ny famindrana ireo mpiasa mbola tsy vita vaksiny efa lehibe noho ny 60 taona ho any amin'ny fandaharam-potoana miasa lavitra amin'ny volana manaraka, ary manolotra mpiasa roa andro misaraka handehanany hanao vaksiny manohitra ny COVID-19.
RosiaNy isan'ny fahafatesan'ny COVID-19 isan'andro dia nisondrotra nandritra ny herinandro maro ary nahatratra voalohany ny voalohany tamin'ny faran'ny herinandro teo nandritra ny faran'ny herinandro teo ny tahan'ny vaksiny kamo, ny fiheveran'ny besinimaro ny fitandremana sy ny tsy fankasitrahan'ny governemanta henjana ny fameperana.
Rosiana 45 tapitrisa eo ho eo, na 32 isan-jaton'ny olona efa ho 146 tapitrisa ao amin'ny firenena, no vita vaksiny tanteraka.
Any amin'ny faritra sasany, ny areti-mifindra dia nanery ny manampahefana hampiato ny fanampiana ara-pahasalamana ho an'ny mponina satria voatery nanasongadina ny fitsaboana ireo mararin'ny coronavirus ny tobim-pahasalamana.
In Moscow, na izany aza, nitohy toy ny mahazatra ny fiainana, miaraka amin'ireo trano fisakafoanana sy sinema feno olona, ​​be dia be ny clubclub ary barazy karaoke ary ny mpandeha tsy miraharaha ny mandat mask amin'ny fitateram-bahoaka, na dia feno aza ireo sampana famelomana aina tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny alarobia teo dia nanambara ny tompon'andraikitra rosiana fa ny firenena dia nandrakitra ny isan'ny maty indrindra voan'ny coronavirus hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tamin'ny taon-dasa ary ny isan'ny maty indrindra dia notaterina tany amin'ireo tanàna roa lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Moscow sy St. Petersburg.